Sawirada Mourinho Iyo CR7 Oo Qabsaday Boggaga Hore Ee Wargaysyada Caanka Ah Ee Talyaaniga Kadib Kulankii Man United Iyo Juventus. | Laacib.net
Sawirada Mourinho Iyo CR7 Oo Qabsaday Boggaga Hore Ee Wargaysyada Caanka Ah Ee Talyaaniga Kadib Kulankii Man United Iyo Juventus.
08-11-2018 Mohamoud Batalaale Comments Off on Sawirada Mourinho Iyo CR7 Oo Qabsaday Boggaga Hore Ee Wargaysyada Caanka Ah Ee Talyaaniga Kadib Kulankii Man United Iyo Juventus.
Warbaahinta caalamka gaar ahaan saxaafada dalka Talyaaniga ayaa si wayn wax uga qortay kulankii xalay dhex maray kooxaha Manchester United iyo Juventus ee ay Red Devils shantii daqiiqo ee ugu danbeeyay kula timid labadii gool ee ay Juventus natiijada ugu qalibtay.
Wargaysyada caanka ah ee Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport iyo Tuttosport ayaa dhamaantood boggagooda hore ee maanta kaga hadlay kulankii xamasada lahaa iyaga oo si gaar ah u soo qaatay sawiraadii Cristiano Ronaldo ee dabaal degii uu sameeyay markii uu goolka dhaliyay iyo waliba falcelintii Mourinho ee jamaahiirta Juventus.
Cristiano Ronaldo iyo Jose Mourinho ayaa noqday labada shaqsi ee inta ugu badan looga hadlay kulankii Juventus iyo Manchester United iyaga oo labada nin ee reer Portugal sameeyay waxyaabo ay dareenka ku kiciyeen.
Haddaba waxaan halkaan idiin ku soo turjuntay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee maanta lagu daabacay boggaga hore ee wargaysyada caanka ah ee dalka Talyaaniga kadib guushii United iyo guuldaradii Juventus ee Champions League.
Bogga Hore Ee Wargayska Gazzetta dello Sport
Bogga hore ee Gazzetta dello Sport waxaa la soo dhigay sawirka Mourinho oo gacantiisa dhegta saaray si uu jamaahiirta Juventus ugu maadsado iyo Ronaldo oo garankiisa ka qaaday xabadka si uu ugu dabaal dego goolkii aan natiijada keenin.
Waxaana ciwaan looga dhigay: “Juve waa maada Mou”. Waxaana qoraalka la sii raaciyay: “United waxay fadhiisisay ama barfisay Allianz,1-2. CR7 gool cajiib ah ayuu dhaliyay, waa goolkiisii ugu horeeyay Champions League”.
Qoraalka oo sii socda ayaa lagu yidhi: “Bianconeri waxay maamushay 85 daqiiqo iyada oo fursado aad u badan lumisay, kadib soo laabashadii afarta daqiiqo ahayd iyo dhegta gacanta saaristii Jose”.
Waxaana la soo qaatay qoraalka hadalkii Mourinho: “Aniga waa la i caayay, laakiin iftiinka qabowga maalinta markale ma samayn karo”.
Bogga Hore Ee Wargayska Corriere dello Sport
Sidoo kale bogga hore ee wargayska Corriere dello Sport waxaa loo doortay isla sawirkii hore ee Jose Mourinho oo Juventus ku maadsadanaya iyo Ronaldo oo u dabaal degaya goolkiisii Juventus ugu horeeyay ee Champions League.
Laakiin ciwaanka Corriere dello Sport ayaa noqday mid cajiib ah waxaana lagu qoray: “Fashilkii khaaska ahaa”. waxaana qoraalka la sii raaciyay: “Juve waxay maamushay in ka badan saacad, Mata iyo Felleini ayaa soo galay isla markaana afar daqiiqo ayay United dhinaca kale ugu dhigtay”.
Qoraalka oo Mourinho looga sii hadlayo ayaa lagu yidhi: “Tatikis yahanka reer Portugal waxa uu gacantiisa saaray dhegta, ugu dhawaan rabshad ayuu kicin gaadhay: ‘Si aan kala joogsi lahayn ayaa la ii caayay, laakiin mar danbe ma samayn doono”.
Bogga Hore Ee Wargayska Tuttosport
Wargayska Tuttosport ayaa isla sawirkii hore soo qaatay laakiin Ronaldo oo uu sawirkiisa wayneeyay iyo Mourinho oo uu goobo galiyay ayaa ciwaan loo dhigay: “Mou ayaa aamusiiyay”. Waxaana qoraalka la sii raaciyay: “Goolkii layaabka lahaa ee Roanldo kadib Juve ayaa fursado badan lumisay waxaana dhinaca kale ugu dhigtay United, waxaana dhiiro galiyay qaladaadkii Szczesny”.
Qoraalka TuttoSport ayaa looga sii hadalay dhacdadii Mourinho sameeyay: “Dhamaadkii ciyaarta, Mourinho ayaa maad kaga jawaabay caydii uu ka helay jamaahiirta Allainz. Wali Bainconeri ayaa ugu saraysa, kaliya barbaro ayay uga baahan yihiin Valencia”.